အလုပ်များ Home | 24 Naryee
အလုပ်များ / 1 -9၏9စာရင်းပြုစုခြင်း
Company အတိုင်းအတွက် ၀က်ဆိုက်ရေးပေးနေသော iBiz Service Provider Co., Ltd မှ စိတ်ထက်သန်ပြီး မိမိတာဝန်ကို တာဝန်ယူပြီးမြောက်အောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်သည့် Manager တစ်ဦးအလိုရှိပါသည်။ Sale Team ကို ဦးဆောင်နိုင်ရမည်။ Sale Target ကို ပြည့်မှီအောင...
Marketing (အိမ်ခြံမြေ) (MMK 150,000+Commission)
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိဂျပန်အိမ်ခြံမြေအကျိုးတော်ဆောင် ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုမှဝန်ထမ်းများခေါ်ယူနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ Salary : 150000 + Comission - အထက်တန်းပညာရေးရှိရမည်။ - Real Estate ပိုင်းနှင့်အတွေ.အကြုံ (၁) နှစ်ရှိရမည်။ - Computer ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ရမ...
Accountant (MMK 180,000 -200,000 KS)
ကမာရွတ်မြို့နယ်ရှိ Phone များကိုဖြန့်ဖြူးရောင်းချသောကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုမှဝန်ထမ်းခေါ်ယူနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ Salary : 180000 - 200000 Ks - ဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။ - LCCI II အောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။ - လုပ်ငန်းအတွေ့ အကြုံအနည်းဆုံး (၁) နှစ်ရှိသူဖြစ်ရမည်။ - Comput...
Sales Executive (Freight & Forwarding) (MMK - 200,000 ~ 300,000 Ks)
The recruitment company is Export/Import Company located in Pazundaung Township. Salary : 200000 - 300000 Ks - Any graduated. - Age between 24-35 years old. - Minimum 2-3 years experience in related field. - Diplomas or certificates in Sales & Ma...
Sales Executive (MMK - 200,000 Ks)
ကမာရွတ်မြို့နယ်တွင်ရှိသော စာရေးကိရိယာများကို Trading လုပ်သော Company ကြီးတစ်ခုမှ ၀န်ထမ်းများခေါ်ယူနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ - ဘွဲ.ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။ - Sale ပိုင်းတွင်လုပ်ငန်းအတွေ.အကြုံ (1) နှစ်အထက်ရှိရမည်။ - Customer များပေါ်တွင်စိတ်ရှည်နိုင်ရမည်။ - Computer ...
Media Planner (MMK 400,000 Ks ~)
The recruiting company is Media advertising Company located in Bahan Tsp. - Bachelors degree, relevant courses of Marketing, Business management. - Minimum 1-2 years experience in media planning field. - Media buying experience, dealing with media ag...
Sales & Marketing Officer (Electronic Distribution) (USD USD 500~600 $)
The recruitment company is Trading Company located in Kabaraye Tsp. Salary : USD USD 500~600 $ - Any Graduate. - At least (3-4) years of experiences in related field. - To manage and control purchase, sales, and inventory of our distributors. (Use Mi...
HR Officer (MMK 800,000 Ks)
The recruiting company is Telecommunication company located in Mayangon Township. - Any graduate. - Must be finishing MBA. - At least (5) years experience in HR Management. - Age is between 35 to 40 years. - Computer skills is high level of proficien...
Senior Associate (For Finance) (USD $1000 ++ nego)
The recruitment company is Investment Securities Company located in Bahan Salary : (USD $1000 ++ nego) - CPA (or) ACCA in related field. - Fluent in English both writing & oral. - At least5Years working experience in related field as Manager Ro...